လုပ်ငန်းသစ်တွေက စားသုံးသူတွေကြိုက်မယ်လို့ထင်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တာတွေနဲ့ စားသုံးသူတွေတကယ်ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ဝယ်ယူသုံးစွဲတာတွေ ထပ်တူကျဖို့ တော်တော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ စာရေးသူ Eric Ries ရေးသားထားတဲ့ “The Lean Startup” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းသစ်တွေကို စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကာလမှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို အကြံပြုတင်ပြ ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ Eric Ries ရေးသားထားတဲ့ The Lean Startup ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းသစ်တွေကို စတင်တည်ထောင်တဲ့ကာလမှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်တွေကို အကြံပြုတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းသည် မိမိပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးတွင် လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်တတ်ရန် လူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ၊ လူအများ ကိုယ့်ကို သဘောကျလာစေမယ့် နည်းလမ်းတွေ၊ လူတွေက ကိုယ့်အမြင်ကို လက်ခံလာအောင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ လူတွေကို ဦးဆောင်မှုပြုခြင်းနဲ့ လိုအပ်သလိုစည်းရုံး ခြင်းအတွက်နည်းလမ်းတွေ စတဲ့အခြေခံနည်း လမ်းများကို သိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံး အောင်မြင်တိုးတက်ရေးစာအုပ်တွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါဝင်တဲ့ စာရေးဆရာ ဒေးလ်ကာနယ်ဂျီရဲ့ “ How to win friends and influence people” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှ မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်လိုသူတိုင်းအတွက် အရေးပါတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုသင်ခန်းစာလေးမှာ- ဒေးလ်ကာနေဂျီ ရေးသားခဲ့တဲ့ “How to win friends and influence people” ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးစာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့ လူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက် လိုအပ်သော အခြေခံ နည်းလမ်း (၃) ခု၊ လူအများ ကိုယ့်ကို သဘောကျလာစေမည့် နည်းလမ်း (၆) ခု၊ လူတွေက ကိုယ့်အမြင်ကို လက်ခံလာအောင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (၁၂) ခုနဲ့ လူတွေကိုဦးဆောင်မှုပြုခြင်းနဲ့ လိုအပ်သလိုစည်းရုံးခြင်းအတွက် နည်းလမ်း (၉) ခု တို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Human is the most valuable resource of the organization. The success of the business really depends on the quality and ability of its employees. The objective of this lecture is to see that the effective Recruitment Process can value added the business and can choose the right person for right position.
This lecture shares the systematic steps of Recruitment Process from job analysis to the selection of right person for right place. This is useful not only for the permanent but also for the temporary employees.
This lecture aims to improve businesses’ customer service activities by understanding the different customers and their characteristics.
From this lecture, you can learn about five different customers and their characteristics and then ways to give customer service based on each type of customer.
A value proposition is the benefits ofacompany’s products and services delivered to customers. A company uses it asabusiness or marketing statement to summarize whyacustomer should buyaproduct or useaservice. The purpose of this lecture is that every businessman needs to know how to add the proper value to their products and services to be the customer’s choice.
The lecturer proposes the meaning of value proposition and how to create the values to get the customer’s choice by the following seven ways: 1. Offer better quality 2. Increase your delivery speed 3. Provide additional expert advice for your customers 4. Improve your product’s design and packaging 5. Add simplicity to your customer’s interaction with you company 6. Improve customer service 7. Customization
ယနေ့ခေတ်မှာ လုပ်ငန်းအများစုက မားကက်တင်းသဘောတရားတွေကို လက်ခံကျင့်သုံးနေကြပေမယ့် အားနည်းချက်တွေအများကြီး ရှိနေကြပါတယ်လို့ Kotler က ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အရာတွေမှာ အားနည်းနေကြတဲ့အတွက် မားကတ်တင်းဆိုင်ရာ အဓိကအမှားအယွင်း ၁၀-ခုကို ကျုးလွန်မိကြတယ်။ ယခုသင်ခန်းစာလေးကတော့ Philip Kotler ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ "မားကတ်တင်းအမှား (၁၀) ခု"ကို လေ့လာသိရှိပြီး အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ ဈေးကွက်တွေမှာပြိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့နဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့မားကက်တင်းနယ်ပယ်မှာ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ထင်ရှားတဲ့ Philip Kotler ရဲ့ နာမည်ကျော် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ “10 Deadly Marketing Sins” မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ "မားကတ်တင်းအမှား (၁၀) ခု" နဲ့ အဲဒါတွေကိုပြုပြင်နိုင်မယ့် အကြံပြုချက်တွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုကို စတင်တည်ထောင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အုပ်စုအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ တွဲဖက်ပြီး စတင်အလုပ်လုပ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မန်နေဂျာတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်မှာ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ ပထမဆုံး ရက် (၉၀) အတွင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမရက် (၉၀) “ The First 90 Days” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ကြည့်ရှုလေ့လာပြီး ဦးဆောင်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍသစ်တွေမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ယခုသင်ခန်းစာလေးကို တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့- ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ပါမောက္ခဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ် ဝတ်ခင်စ်ရဲ့ “The First 90 Days” ပထမဆုံး ရက် (၉၀) ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ရေးသားထားတဲ့ ဦးဆောင်သူအသစ်တွေအနေနဲ့ အစောပိုင်းမှာ အောင်မြင်နိုင်ဖို့နဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရေရှည် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အဓိက အချက် (၅) ချက်ခွဲပြီး ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုသင်ခန်းစာလေးကတော့ ကမ္ဘာကျော် Marketing စာအုပ်အများအပြားကို ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ ပါမောက္ခ ဖိလစ်ကော်တလာရဲ့ Marketing 4.0 စာအုပ်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် နည်းပညာအသစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး Marketing လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ သိသင့်တဲ့အချက်တွေကို မျှဝေပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Marketing ဆောင်ရွက်ရာမှာ အရင်တုန်းကလို သမားရိုးကျမဟုတ်ဘဲ ထိထိရောက်ရောက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင် ပါမောက္ခ ဖိလစ်ကော်တလာ ရေးသားထားတဲ့ Marketing 4.0 စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့ Marketing အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်များကို အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့- Digital Influencers & 4Cs Using Content Marketing Multichannel Marketing - Omnichannel Marketing New Buyer's Journey 5As Door Knob - high commitment with low curiosity Human-Centric Marketing for Brand Attraction Brand Affinity - Engagement marketing for Brand Affinity The WOW moment
One of the most important concepts in marketing is the product life cycle. Life Cycle is well known for the kind of cycle that happens all around. Therefore, in this lesson, we aim to understand howaproduct works, from the momentaproduct enters the market and eventually disappears.
The Life Cycle depends on the performance of the business. Understanding this concept may change the way life is integrated into the plans of the business. In this lesson we will show howaproduct goes through four stages of entry.
Decision making is the process of making choices by identifyingadecision, gathering information, and assessing alternative resolutions. A step-by-step approach to the decision making process is an efficient way to make thoughtful, informed decisions. Decision-making playsavital role in management as it is important to achieve the organizational goals/objectives within given time and budget. This lecture is intended for the managers of an enterprise who are responsible for making decisions and ascertaining that the decisions made are carried out in accordance with defined objectives or goals.
This lecture explains programmed vs non-programmed decision, techniques or basic for decision making, decision making process, recognition of decision requirement,4questions that should be asked about any problem, improving group decision making, helping & hindering roles in decision making groups, decision making approaches and situational factors in decision making.
ဒီနေ့ခေတ်ကာလဟာ အစဉ်အမြဲ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ စနစ်တကျ ဆင်ခြင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှသာ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုသင်ခန်းစာလေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့- “Think Big” စာအုပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ရုံတင်သာမကပဲ အမေရိကန်သမ္မတကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်နေသူ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ပြောကြားထားတဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို မှတ်သားပြီး ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့- ကမ္ဘာပေါ်က အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးလည်းဖြစ်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ (၄၅) ဦးမြောက် သမ္မတကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပ်နဲ့အတူ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Bill Zanker တို့အတူ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “Think Big” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ အကြံပေးချက်တွေ၊ မှတ်သားလိုက်နာသင့်တဲ့အကြောင်းကို လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုသည်မှာ လိုအပ်သောစီးပွားရေးရလဒ်များရရှိရန် ပြောင်း လဲရန်လိုအပ်သော လူသားရင်းမြစ် များကို စီမံခန့်ခွဲရသည့် နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့် အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင် သည့်အခါ ဝန်ထမ်းများ၏ ပက်သတ်ဆက် နွယ်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော စနစ်ကျသည့် နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာ လေးမှာတော့ အဖွဲ့အ စည်းတစ်ခုအနေဖြင့် မျှော်မှန်းထားသော စီးပွားရေးရလဒ်ကောင်းများရရှိရန် ပြောင်းလဲမှုများ မည်သို့စတင်လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေစာရင်း၊ အချိန်ဇယား၊ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူများနှင့် အခြားအရေးကြီးသည့် သက်ဆိုင်သူများအပေါ် ကျရောက်သောပြောင်းလဲမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ယခုသင်ခန်းစာမှာဆိုရင် ပြောင်းလဲမှုကို စီမံခန့်ခွဲမည့်အစီအစဉ်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့် စီစဉ်ထားသော ပြောင်းလဲမှုအမျိုးအစားများကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
© 2020 Aung Myin. All rights reserved.